“အတွေးစလေးတွေ”: ချီလေတဲ့ချီလေ ( ၁ ) . . .
Posted by Han Kyi at 9:27:00 am
တစ်လက်မမှ နောက်မဆုတ်နိုင်ကြောင်း အထပ်ထပ်ငြင်းမယ် ဆိုတာတွေက ဆရာဟန်ဟာ ဆရာဖြစ်ဖြစ်ကြောင်း ပြတာတွေပဲ.. အိမ်ထောင် သက်ကြာလေ သဘာပြလေပဲ :D
လင်မယားဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံစာ မပြခဲ့ရတာပဲ ကံကောင်းတယ်မှတ်ပါ.. စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ဖင် ပိတ်ကန်ခဲ့ရမှာ..
ဘားအံရောက်တာများ ပသိချောင်းဘက် ကူးသွားပြီးတာပဲ.တကယ် လှတဲ့နေရာဗျ
ဟုတ်ကဲ့.. ဖတ်သွား.. အဲလေ ယောင်လို့
အင်း... မပုတင် နဲ့ ၅၀၀ တန်နဲ့ ဈေးတူတူဖြစ်နေပါရော့လား။ ဘားအံဘက်ကို မရောက်ဖူးတော့ ဆရာ့ဟန့် ဒုတိယပိုင်းကို ဆက်ပြီး ဖတ်ဦးမယ်ဗျို့...
ဒါနဲ့ စကားမစပ်... နောက်ဆုံး ၀ါကျလေးမှာတော့ (ကွင်းစ ကွင်းပိတ် လိုမယ်နော့.. မဒမ်ဟန်ကြည်မှလွဲ၍ ဆိုပြီးတော့) :P
အိမ်း.. ဒီဆရာဝန်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်က အတော်အသုံးဝင်လေရဲ့..း))... ဆရာဟန်ကြည်ရဲ့ အရေးအသားကတော့ မျက်လုံးထဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လာအောာင် ပုံဖော်ပေးနိုင်ရဲ့..း))
သင်္ကြန်ရေတရက်ပဲ စိုလိုက်ရတယ် ဆြာ
ဒါတောင် လမ်းထဲက ခလေးတွေကျောကိုဗြင်းထည့်လိုက်တာ
း) တောင်ဆင်းတောင်တက်ခရီးကိုတော့ ဂရုစိုက်ဆြာရေး)
22 April 2012 at 19:58
သြော် ကျောင်းက ပြန်လာတာလား ဆိုပြီး
( အဟိ . . . ငါကွ )
နောက်တခါ ဗီဒီယို ရိုက်ပြီး youtube ပေါ်တင်ဖြစ်အောင် တင်မယ်ဆိုတဲ.အစီအစဉ်ကို လုံးဝဥသုံ ထောက်ခံပါကြောင်း။
သူတို.ကိုယ်သူတို. ဘာထင်နေတယ်မသိ၊ ယူနီဖောင်းဝတ် သူတောင်းစားတွေ
ဟုတ်မှာ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တောင် သင်္ကြန်တုန်းက ရေလာ မလောင်းရဲတာ :D ။ အဲ့သည် စစ်တာ ဆေးတာ ရိတ်တာ ဖြတ်တာတွေ ခုထိ မပျောက်နိုင်သေးဘူးလားဗျာ။ လေပါတယ် ဆရာရယ်။ တကယ်ပါပဲ။
ဟဟဟ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ဆိုင်ကယ်မောင်းလာတဲ့ဆြာကြည့်ကို မျက်လုံးထဲမြင်ယောင်မိလို့ ဟဟဟဟ လို့တောင် အော်မရီနိုင်ပါဘူးဆြာရယ် ဟီးးးဟီးးဟီးး
ဟိုကြော်ငြာလို ကျနော်ဆရာဝန်ပါဆိုပြီး ဗိုက်လှန်ခိုင်းလိုက်ရမှာဗျး)))))
မိုင်တစ်ရာကျော်ကို ဆိုင်ကယ်တစ်ယောက်တစ်စီးစီနဲ့ မောင်းကြတယ်ဆိုတာကို အလိုလို သဘောကျသွားတယ်။ ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီမှ အဲလို ခရီးကို အသာတကြည် သွားနိုင်မယ် ယုံကြည်မိလို့ပါ။
ကျွန်တော်က ကိုဟန်ကြည်ဘယ်မှာနေပါလိမ့်လို့ပဲစဉ်းစားနေတာ။ ရှေ့ကပို့စ်တွေမှာပါချင်ပါနိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ သနပ်ခါးလိမ်းတဲ့ဓလေ့ရှိတယ်တဲ့လား။ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့အကျင့်ဆိုးဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင်အားလုံးနဲ့ဆိုင်မယ်ထင်တယ်ကိုဟန်ကြည်။ လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဟန်ကြည်နဲ့အတူ ခရီးလိုက်သွားကြည့်ပါဦးမယ်။ ဟာသကတော့ တစ်ပြားမှမလျော့ဘူးဗျို့။ သဘောကျမိပါရဲ့။
29 April 2012 at 07:33
ဖတ်လာသမျှ နောက်ဆုံးရောက်မှ သနပ်သုတ်ခန်းမှာ မောင်းပြေးရတာ ဖတ်မိတော့ ရီမိပါလေရော။
နောက်အပိုင်း ဆက်ဖတ်လိုက်အုံးမယ်။ စာမဖတ်တာ ကြာလို့ စာကြွေးတွေ ရှင်းရအုံးမယ်။
ကိုယ်ပြည်တွင်း ခရီးသွားတာတောင် ဒင်းတို့ ကြောင့် စိတ်ရှုပ်ရပါ့..သနပ်ခါးသုတ်တဲ့ ဓလေ့ကတော့ ဆန်းသား..
ဟင် ... အစကတော့ လူပြိုဆို ... :)
ဘားအံအကြောင်း ပါလာတော့လည်း ရေးဦးမှပါပဲ ။
* ပထမ စရှင်းရမှာက သနပ်ခါးနဲ့ သုတ်တယ် ဆိုတာပါ ။ ကျနော်တို့တုန်းက မရှိပေါင်ဗျာ ၊ ယိုးဒယားက ပေါင်ဒါသုတ်တဲ့ အလေ့ကို အတုခိုးထားတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
* ဆရာ လာတဲ့လမ်းမှာ ကလေးတွေ သင်္ကြန်မကျခင် တစ်လလောက်ကတည်းက ရေကြိုပက်နေကြတာ မကြုံဖူးသေးဘူးထင်တယ် ။ အိန္ဒုရွာကနေ မော်လမြိုင် အထွက်လမ်းဖက်က ရွာတစ်ရွာကတော့ ကြမ်းတယ်ဗျ ၊ သတိထား ရေပက်ဖို့ မရပ်ပေးတဲ့ ကားဆရာတွေကိုတောင် ဝိုင်းရိုက်တတ်တယ် ။ ကရင်ရွာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။
* ကိုဟန်ကြည်ဓါတ်ပုံထဲက လမ်းနဲ့ခပ်ဆင်ဆင် တူတယ်ဆိုတဲ့နေရာက တယ်ကောင်းလာပါလားဗျ ၊ အစက ကျောက်လမ်းကြီးကို :-)
ပြီးတော့ ဧပြီလသာဆိုတယ် ဘေးမှာ စိမ်းစိုနေတာပဲ ၊ အမြဲဆို ခြောက်သွေ့ပြီး စစ်သားတွေရှို့ထားတဲ့ မီးတွေနဲ့ လမ်းဘေးမှာ မဲနေတာပဲဗျ ။
* ဆရာ့ မပုတင်ကိစ္စက အသေးမွှားပါဗျာ ၊ မြဝတီသား စစ်စစ်ကိုတောင် မင်းကို ထောင်အနှစ် ၂၀ ချလိုက်လို့ရတယ် ဆိုတဲ့ ပြည့်သူ့ သားကောင်းကြီးများနဲ့ မကြုံသေးလို့ပါ ။ ယောင်နန လုပ်လို့ကတော့ ပါတာအကုန် ချွေမယ့်သူ ၊ မိန်းကလေးဆို ခဏထိန်းသိမ်းပြီး စောင်မကြည့်ရှူမယ့် သူတွေကို ဆရာ မကြုံသေးပါဘူး ။ အဲ .. ကရင်ဆိုလို့ .. ကျနော်တို့လည်း ကိုယ့်ပြည်နယ်ထဲ တရားမဝင် နေထိုင်သူတွေ ဖြစ်နေတာ ကြာကြာလှပေါ့ဗျာ ၊ ခုမှ မဟုတ်ပါဘူး ၊ ပြောလည်း ကြုံမှ ယုံကြတော့ အသာငြိမ် စိတ်လျှော့နေရသကိုး ခင်ဗျ ။